सामाजिक सञ्जालका नाममा जथाभावी लेख्नेहरु होशियार ! - Seto Khabar सामाजिक सञ्जालका नाममा जथाभावी लेख्नेहरु होशियार ! - Seto Khabar
सामाजिक सञ्जालका नाममा जथाभावी लेख्नेहरु होशियार !
July 29, 2018 सेतो खबर
पोखरा, साउन १३ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले सञ्चार क्षेत्रमा नयाँ कानूनको निर्माणमा सरकार लागेको बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीद्वारा सञ्चालित प्रजातन्त्र सेनानी दयाशंकर पालिखे स्मृति राष्ट्रिय पत्रकारिता सम्मान–२०७४ बाट नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष धर्मेन्द्र झालाई आज सम्मान गर्दै उनले साना लगानीका सञ्चारमाध्यमको विज्ञापनको खास कानून निर्माणलगायत काम अघि बढेको बताए ।
डिजिटल सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरणका साथै सामुदायिक र व्यावसायिक रेडियोको वर्गीकरण, मिडिया काउन्सिलको स्थापनालगायत काम पनि हुँदै गरेको उनले बताए । उनले सञ्चारमाध्यम आलोचक हुनुपर्ने सुझाव पनि दिए । पत्रकारिताको खास मानक हुने बताउँदै मन्त्री बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जालका नाममा जथाभावी आउने कुरालाई सरकारले नियमन गर्ने उल्लेख गरे ।
उक्त अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष झालाई रु ३३ हजार ३३३, सम्मानपत्र र दोसल्लासहित सम्मान गरिएको थियो । रासस
‘खल्ती डिजिटल वालेट’ले सुरु गर्यो क्यु–आर कोडमा आधारित डिजिटल टिकेटिङ सेवा
निजि जानकारी चोर्न ह्याकर्सद्धारा गुगलको प्रयोग, यसरी बच्नुहोस्
३२ मेगापिक्सल पप अप सेल्फि क्यामरासँगै नेपालमा लन्च भयो Vivo V15 Pro, यसता छन् फिचर र मुल्य ?
चन्द्रमा पछि चीनले बनाउदैछ कृत्रिम सुर्य, १० करोड डिग्रि सेल्सियस तापक्रम दिने